Raic AICAR powder (2627-69-2) Vaiti - Phcoker Chemical
AICAR powder, inozivikanwawo seAICA riboside, inonzi purine precursor ine antineoplastic basa uye anosarudza activator ye AMP-activated .......
Raic AICAR powder (2627-69-2) video
Raic AICAR powder (2627-69-2) Tsanangudzo
Pakawanda yeAICAR powder inozivikanwawo seZMP inonzi analog ye AMP iyo inogona kukurudzira AMP-inotarisira protein kinase basa (AMPK). Raic AICAR poda iri pakati pechizvarwa cheinosine monophosphate. Raic AICAR poda iri kushandiswa kurapwa nekudzivirirwa kurwisana nekukuvara kwechemicalac, inogona kupinda masero emwoyo kuti ivhiringidze adenosine kinase uye adenosine deaminase. Iyo inowedzera chiyero che nucleotide re-synthesis kuwedzera chizvarwa cheAdenosine kubva kune adenosine monophosphate panguva yemamiriro ezvinhu e-myocardial ischemia. Raic AICAR poda inowedzera glucose inowedzera kuburikidza nekuderedza translocation ya GLUT4 uye / kana nekuita p38 MAPK nzira. Pari zvino, mushonga wacho wakaratidzwawo sekuti unogona kurapwa nechirwere cheshuga nekuwedzera kushandiswa kwemagetsi kwemasukisi nekuchinja kuumbwa kwemuviri.
Raic AICAR powder (2627-69-2) Specifications
Product Name Raic AICAR powder
Kemikari Name 1-ribosyl-4-carboxamido-5-aminoimidazole, ARA 100, ARA-100, ARA100, GP 1 110, 5-aminoimidazole-4-carboxamide 1-ribofuranoside, 5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside, acadesine, AICA ribofuranoside, AICA riboside, aminoimidazole carboxamide ribonucleoside, arasine, Z-riboside
Molecular Wsere 258.23
Kunyorera Point 214-215 ° C
Biological Half-Life Akapfupi kwazvo
Skukodzera H2O:> 10 mg / mL
Raic AICAR powder APane AMPK activator
Pakawanda yeAICAR powder inozivikanwawo seZMP inonzi anogog of AMP, is Cell-permmeable, allosteric activator ye AMP-activated protein kinase (AMPK). Iyo inokwanisa kukurudzira AMP-inotarisira protein kinase basa (AMPK), inoita kuti kuwedzera, kuparadzanisa uye kuderedza minda ye osteoblastic MC3T3-EI masero uye inovharidzira kuratidzwa kwepfungwa-inokonzerwa neproinflammatory cytokines neNOS mu astrocytes.
Raic AICAR poda iri pakati pechizvarwa cheinosine monophosphate. Raic AICAR poda iri kushandiswa kurapwa nekudzivirirwa kurwisana nekukuvara kwechemicacac, inogona kupinda masero emwoyo kuti ivhiringidze adenosine kinase uye adenosine deaminase. Iyo inowedzera chiyero che nucleotide re-synthesis kuwedzera chizvarwa cheAdenosine kubva kune adenosine monophosphate panguva yemamiriro ezvinhu e-myocardial ischemia. Raic AICAR poda inowedzera glucose inowedzera kuburikidza nekuderedza translocation ya GLUT4 uye / kana nekuita p38 MAPK. Pari zvino, mushonga wacho wakaratidzwawo sekuti unogona kurapwa nechirwere cheshuga nekuwedzera kushandiswa kwemagetsi kwemasukisi nekuchinja kuumbwa kwemuviri.
AICAR inogadzirwa ne purine uye inobata mbeu. Zvakakosha mukurapa zvirwere zvinokonzerwa nehutachiona zvakadai sorudzi rwe2 chirwere cheshuga pamwe nekugona kurapwa kwemhando dzakasiyana-siyana dzekenza.
AICAR powder (2627-69-2) Mushonga weAito
Nomeoxyside fomu yeAICAR, acadesine, inonzi analogog ye adenosine iyo inopinda masero emwoyo kuti ivhiringidze adenosine kinase uye adenosine deaminase. Iyo inowedzera chiyero che nucleotide re-synthesis kuwedzera chizvarwa cheAdenosine kubva kune adenosine monophosphate panguva yemamiriro ezvinhu e-myocardial ischemia. Mumoyo myocyte, acadesine phosphorylated kuAICAR kuti iite AMPK pasina kuchinja mazinga eiucleotides. AICAR inokwanisa kupinda mu de devo synthesis pathway yeAdenosine synthesis kuti inhibit adenosine deaminase zvichikonzera kuwedzera mumazinga eAtP uye mazinga adenosine.
Kushandiswa kweAICAR powder (2627-69-2)
▪ Kuita-kukurudzira zvinodhaka
▪ Glucose inokurudzira stimulant
▪ Matambudziko emagetsi
varumbidzwa AICAR powder (2627-69-2) Dosage
Miridzo yeAICAR inogona kubva kubva ku 150 mg zuva rega rega, kana ukaiisa neGW, kusvika kune 500 mg pazuva kana iwe uchiishandisa iwe pachako. Bhodhoro rimwe nerimwe rinowanzouya mu 50 mg dosages, saka zviri pachena kuti inodhura. Nokuda kwechikonzero ichi, zvinonzwisisika kuti zvishandise mumavhiki mana apfuura zuva rekukwikwidza.
kubatsira AICAR powder (2627-69-2)
♦ AICAR inogadzirwa ne purine ine basa rinoputika. Zvakakosha mukurapa zvirwere zvinokonzerwa nehutachiona zvakadai sorudzi rwe2 chirwere cheshuga pamwe nekugona kurapwa kwemhando dzakasiyana-siyana dzekenza.
♦ AICAR chirongwa chekurapa matambudziko emagetsi.
♦ AICAR ine mikana yekurapa yekurapa zvirwere zvinokonzerwa neuroinflammatory apo microglia yakagadzirisa inobata basa rekuita zvekuita.
♦ AICAR inobatsira kuvandudza motokari, basa rekuyeuka uye uropi hunoshanda
♦ AICAR inoshandiswa zvakanakisisa sekubatanidzwa kumutsara wokutsungirira. Vatambi vanozvishandisawo nekuita basa mukusimudzira mune zvemitambo kwavanoda kutsungirira.
♦ AICAR inonzi nucleoside analogue inokwanisa kupinda nucleoside mapolisi uye inogona kuwedzera zvikuru mazinga eAdenosine munguva dzeAATP kuputsika. Adenosine-regulating agents (ARAs) vave vachizivikanwa pakugona kurapa mu myocardial ischemia.
♦ AICAR inoshandiswa pakurapa acute lymphoblastic leukemia uye inonzi ine chirwere chepachiviri chemigumisiro.